Olee otú B2B Marketing Successga nke Ọma Ya Si Dabere na Organizationtù Ndi Niile | Martech Zone
Otu B2B Azụmaahịa Gị Si Dabere na Nhazi Nile
Kedu ihe bụ Ntụziaka maka B2B Digital Marketing Successga nke Ọma?
The 2015 Ihe Na-arụ Ọrụ Ebe akụkọ na-eme ka uche nke ọdịdị ala dijitalụ nke taa dị iche iche. Na-arụ ọrụ na mmekorita ya na Ndị Ahịa na Circle Nnyocha, Omobono nyochara ndị isi ụlọ ọrụ 331, na USA na UK, gafee Azụmaahịa, Ahịa, Ọrụ Ndị Ahịa, HR na Internal Communications iji ghọtakwuo ebumnuche ha, mmefu ego, mmemme na atụmatụ / nsogbu.
Lee ndị ihe oriri na Onobono na-enye maka ihe ịga nke ọma ahụ:
Ulo ahia choro bu ugbua oru onye obula.
Ngalaba niile di iji oji dijitalụ emebere.
Ire ahia n’aga n’iru ọwa ọhụrụ dị ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, vidiyo, na blọọgụ (mana ejighị n'aka na ọ dị irè).
A usoro dijitalụ nwere nnukwu mmetụta.
An usoro agwakọta na-enyere site n’inwe onye isi ndu, onye ọ bụla na-aghọta mkpa, nkwado nhazi, ịdị njikere imekọ ihe ọnụ na ịhazi ebumnuche na ihe ndị ka mkpa.
Ọgwụgwụ nke akụkọ nwere ike ịbụ bit controversial… etinye ahịa na-elekọta dum B2B Digital Strategy. Onwe m, echere m na ọ nwere ike ịbụ ntakịrị oke. Ndị na-ere ahịa na-abụkarị ihe ịtụnanya na ịmepe ọhụụ ahụ, mana ọ chọrọ ahịa na ọrụ iji chụpụ usoro ahụ kpamkpam.
Fọdụ ụlọ ọrụ na-ahazi site na etiti Onye isi ndị nnata ego (CRO) inwe ihe ndekọ dị mkpa maka njigide, nnweta na ịbawanye uru nke mmekọrịta ndị ahịa. Echere m na m ga-agbanye atụmatụ ahụ tupu atụfu ya na ahịa.
Tags: ahịa b2bb2b ịga nke ọma ahịanyocha gburugburuNdị ọrụ nlekọta ndị ahịadijitalụ ahịa ihe ịga nke ọmandị ọrụ nchịkwa mmadụnkwukọrịta dị n'imeomobonondị ahịa
Etu ahia gi si erite uru na Social Media Marketing